XOG GAAR AH: PuntlandTimes oo ogaatay in uu burburay Wada hadal u socday 7 maalmood, Ganacsatada G Banaadir & Xukuumada Soomaaliya. – Puntlandtimes
XOG GAAR AH: PuntlandTimes oo ogaatay in uu burburay Wada hadal u socday 7 maalmood, Ganacsatada G Banaadir & Xukuumada Soomaaliya.
February 28, 2018 W LAASCAANO
MUQDISHO(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes ayaa ogaaday in uu burburay wada hadalo u socday mudo 7 maalmood ah guddiyo ka kala socday Xukuumada Faderaalka ee Soomaaliya & Ganacsatada gobalka Banaadir, kuwaas oo diiradda lagu saarayey arrimaha ku aadan Canshuuraha dalka, gaar ahaana Canshuurta Iibka oo uu muran badan ka taagan yahay.
Cali Dhoore Xasan oo katirsan ganacsatada gobalka Banaadir ee wada xaajoodka qaabilsanaa ayaa sheegay in ay heleen fariin ka timid dhinaca dawladda Faderaalka, oo loogu cadeeyey in ay gabi ahaanba joojiyeen wada hadaladii rasmiga ahaa ee socday.
Mr, Dhoore wuxuu u sheegay Puntlandtimes waxa socdaa ay u arkaan arrin siyaasadeysan oo ay gadaal ka riixayaan shaqsiyaad leh dano siyaasadeed, wuxuuna sheegay in wixii laga wada hadlayayba ay diiday dawladda Faderaalka.
Wasiirka maaliyada ee dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beylah oo ah qofka ay eedaynayaan ganacsatada oo ay la hadashay Puntlandtimes.com wuu beeniyey arrintan, wuxuuna shegay in wada hadalada hakad galay aysan jirinin.
Xog ka madax banaan labada dhinac oo ay heshay Puntlandtimes.com waxay cadeynayaan in uu jiro is faham dhexmaray guddiga maaliyada ee baarlamaanka iyo Xukuumada Faderaalka, kaas oo ku aadan in Canshuurta Iibka ay waajib tahay in laga qaado alaabaha yaala dekeda magaalada Muqdisho.
Ilo xog-ogaal ah ayaa daaha ka rogaya in Guddiga Maaliyada ee baarlamaanku ay ku cadaadiyeen Xukuumada in la dhimo canshuurta laga qaado mushaarka Xildhibaanada baarlamaanka Faderaalka, haddii ay taasi dhacdana ay meelmar ka dhigi doonaan Canshuurta Iibka Qaranka oo hadda ay hortaagan yihiin ganacsatadu.
Is heysiga hareeyey howlaha dekeda magaalada Muqdisho ayaa ah mid u muuqda in uu u xuubsiibanayo arrimaha siyaasadeed ee dalka, saameyn-na cabsi laga qabo in uu ku yeesho kalfadhiga baarlamaanka Faderaalka oo furmaya bisha Maarso ee fooda nagu soo haysa.